Uyenza njani iMithambo yeThole emi
Ukuba ugqibe kwelokuba uzilungele unyaka omtsha, sebenzisa umthambo oMileyo weThole kwindawo yakho yesiqhelo ukomeleza nokubumba amathole akho. Khawulezisa iziphumo zokuma kwethole lakho ngezi ngcebiso zoyikekayo:
Ukuzifudumeza nokuzolula: Njalo qalisa ukuzilolonga kwethole lakho ngokufudumeza umzimba. Kubalulekile ukolula emva kweseshoni yethole.
Phefumla ngokufanelekileyo: Exhale ngexesha lokuzilolonga xa usenza umthambo wethole. Eli nqaku lenzeka ngexesha lelona celomngeni lokuhamba.
Sebenza wonke umzimba ongezantsi: Amathole aqinileyo nachaziweyo ziinjongo ekufanele ukuba uzilwele. Unokuyinyusa inkqubo ngokuqaphela ukuba zisebenza ngokudibeneyo nomzimba wakho osezantsi. Kubandakanya ukuhamba kwamathanga, i-quads, i-hams, kunye ne-buns kudala umlinganiso ongcono kunokusebenza kwamathole, kunceda amathole asebenze ngokufanelekileyo, kwaye kuthintela ukwenzakala.
yimalini ounce kwiipuni
Kuphephe ukubetha amathole akho: Kungcono ukuzilolonga ithole kancinci. Ukuqhuma kunye nokuhla kunokudala ubunzima obubuhlungu kwiimisipha zethole.
Lungisa i-engile yakho yeenzwane: Xa usenza umthambo wethambo lungisa i-engile yakho yeenzwane ukuya kwindawo efanelekileyo. Kunqande ukolula iinzwane zakho kude kangaka ngaphakathi okanye ngaphandle kangangokuba ubeke uxinzelelo emadolweni okanye emaqatheni, ubangele ukwenzakala.
yintoni iyeza le-gabapentin
Phucula ithoni kunye namandla amathole akho ngokuhamba kweThole eliMileyo:
Yima ubude iinyawo zakho zityalwe phantsi. Bamba isitulo emva kwenkxaso.
Gcina umqolo ngokuthe tye, ungabinangxaki, kwaye unciphise phantsi.
Khawufane ucinge umtya ekubambelele entlokweni yakho ukuya ezinyaweni.
Kancinci phakamisa izithende zakho emgangathweni ukuze ubunzima bakho bukwiibhola zeenyawo zakho. Gcina isimo esifanelekileyo. Bamba umzuzwana. Buyela ukuqala.
Wellbutrin kunye nokwehla kobunzima
Yakha umsipha kunye nethole elimileyo.
Yenza 5 ukuya ku-10 ukuphindaphinda, ukuqhubela phambili ukuya kwi-10 ukuya kwi-20.
Sebenzisa ezi nguqu zilandelayo ukuze ulungelelanise lo msebenzi kwinqanaba lakho lokuqina:
Sebenzisa iqonga eliphakanyisiweyo: Ukongeza ubunzima, yenza le ntshukumo kwiqonga eliphakanyisiweyo okanye inyathelo eliphakanyisiweyo. Ekuqaleni, izithende zakho kufuneka zandiswe zisemgangathweni kangangoko kunokwenzeka.
Thwala iintsimbi zamaqatha: Ngaphezulu komceli mngeni, nxiba iintsimbi zamaqatha ukunyusa ukuxhathisa.
i-hydrocodone xa ithelekiswa ne-oxycodone
Imetropol uxinzelelo lwegazi oluphezulu
iproksi n apap 100 650
isimvastatin 40mg yecala lesiphumo
folic acid 1 milligram tablet
iziphumo ebezingalindelekanga zecarafate